Dullaysi idinka Yeeli mayno !” Madaxweynaha Ruwaanda oo Runta u sheegay Shiinaha ! | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Dullaysi idinka Yeeli mayno !” Madaxweynaha Ruwaanda oo Runta u sheegay Shiinaha...
Dullaysi idinka Yeeli mayno !” Madaxweynaha Ruwaanda oo Runta u sheegay Shiinaha !
Paul Kagame Madaxweynaha dalka ruwaanada, ayaa amar ku bixiyey in dalkiisa degdeg looga eryo 18 qof oo Chinese ah maalintii shalayto .
Nimankan ayaa lagu eedeeyey inay ku tunteen xuquuqda madaniyiinta dalkaasi, kaddib markii ay muwaadiniin ruwaanda u dhashay ay saacado badan oo dheeraad ah ugu shaqaysteen sidii adoomo ,waxaana lagu war geliyey inaysan abid dalkaa ugu soo noqon karin.
madaxweynaha ruwaanda oo arintaas kahadlaya wuxuu yiri
‘‘Tani cashar ha idiin noqoto, Na xushmeeya waan idin xushmaynaynaa waana soo dhowaynaynaa qof kasta oo qalbi wanaagsan, balse dib dambe u aqbali mayno in qaaradeenna nalaku adoonsado!”
“Afrika waa qaarad nabadeed mana u dulqaadan doono sinji quursi. Dalkan waxaa leh Afrika iyo qof kasta oo wanaag nala maagan waa la soo dhowaynayaa.” ayuu yiri madaxweyne Paul Kagame isagoo xanaaq ka muuqdo
Shakhsiyada madaxweyne #Kagame
Madaxweyne Paul kagame lagu amaanaa Geesinimadii uu wadankiisa uga soo saaray burburkii 1994 , waxaa lagu sifeeyaa Hogaamiye qabweyn oo reer galbeedka iska celiya ,kagana adkaaday Doodo badan oo uu kula galay jaamacada Oxford ,waxaa lagu sheegaa hogaamiye afrikaanimadu kuweyn tahay .
Reer galbeedka ayaa ninkan ku naanaysa Keligii taliyaha Shacabkiisu jecel yihiin oo kasbaday Quluubta dadweynaha !!
Ruwaanada waxay kamid tahay wadamada hogaan wanaaga, xasiloonida siyaasadeed iyo koboca dhaqaale ugu horeeya afrika sanadihii ugu dambeeyey .
Horumarka uu Ruwaanada u horseeday !!
Dalka Rwanda ayaa heshiis dhanka nukliyeerka ah oo koronto laga soo saarayo waxay la gashay dalka Ruushka, si ay sare ugu qaaddo awooddeeda wax soo saar.
Heshiiskan ay Rwanda la gashay Ruushka, ayaa keenaya in wershad ku shaqaysa tamarta nukliyeerka laga dhiso dalkaasi. Ruushka ayaa sidoo kale Rwanda ka dhisaya xarun lagu barto cilmiga nukliyeerka iyo tiknolojiyadda oo laga dhisayo Kigali (Nuclear Science and Technology).
Dhinaca kalena Rwanda ayaa cirka u gantey satellite la yiraahdo Icyerekezo, kaasoo loogu tala galay inuu xiriirka internet-ka gaarsiiyo ardayda ku nool jasiiradda Nkombo Island, ee harada Lake Kivu.
Dayax-gacmeedkan oo la ganay 26-kii Febraayo sanadkii tegey, ayaa durba keenay natiijo aad u wanaagsan iyadoo ay u aayeen ardayda dugsiyada miyiga iyo meelaha fog ee Rwanda.
Ruwaanda iyo soomaaliya .
Ruwaanada laba sannadood baynu xorriyada kaga horeynay hadaan soomaali nahay ,sidoo kale Sedex sannadood ayaynu burburka kaga horaynay , balse hogaamiye karti iyo aragti leh bay heshay Ruwaanada iyo Shacab fiican oo is cafiyey iskana ilaaway wixii dhib soo shex maray .
taasna waxay keentay in innagoo burburka qarankeena ku foogan ay iyaguna dhismaha qarankooda ku fooganaadaan. maantana waan qiyaasi karnaa halkaan kala joogno !!
Linkigan hoose Waxaad ka daawan kartaa Madaxweyne Kagame Goaankiisii adkaa ee uu dalkiisa dib ugu dhisay ,.
YoutubeLink | https://youtu.be/9OuK64CCcs0
Previous articleInsecurity in Mogadishu due to rising rents
Next articleMaamulka Galmudug oo la wareegay Garoonka diyaaradaha Cadaado
Is it true that an al-Shabaab official escaped from the central...
Villa Somalia oo war kasoo saartay kulankii maanta iyo qodobadii looga...